Antananarivo Avaradrano : 65%-n’ ny karatany efa nomerika avokoa -
AccueilSongandinaAntananarivo Avaradrano : 65%-n’ ny karatany efa nomerika avokoa
Efa miroso tsikelikely amin’ny fametrahana ilay fandaharan’ asa amin’ny fanatsarana sy fanavaozana ny mikasika ny tontolon’ny fananan-tany amin’ny ankapobeny eto Madagasikara ny eo anivon’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE) sy ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany amin’izao fotoana izao.
Araka izany, natao sy nametrahana tetikasa filamatra ny eny amin’ny sampan-draharahan’ny Fananan-tany eny Avaradrano. Noho izay indrindra, teny no nanombohana ilay famadihana ho niomerika ny karatany.
Raha ny fanazavan’ireo tompon’andraikitry ny fananan-tany teny an-toerana, efa mahatratra 65%-n’ny karatany kirakirain’izy ireo no efa voavadika ho nomerika avokoa. Izany hoe, miisa 25.629 ireo karatany efa nomerika amin’izao fotoana izao ho an’Avaradrano manokana. Karatany miisa 40 isam-bolana no voavadika.
Araka izany, nidina ifotony nijery ny fomba fiasa sy ny fampiasana ilay “logiciel” mitondra ny anarana Lisom (Land Information System of Madagascar) teny amin’ny sampandraharahan’ny Fananan-tany eny Avaradrano ny minisitry ny M2PATE, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, sy ny tale jeneralin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany, Hasimpirenena Rasolomampionona. Raha ny fanazavana hatrany, dia hampidirina ao anatin’ity “logiciel” ity avokoa ny mombamomba ilay karatany sy ny tompony, ary mivadika nomerika izany rehefa tafiditra ao. Izany hoe, mampiasa “internet” ity “logiciel” Lisom ity. Rehefa tafiditra ao kosa ny dosie, avy hatrany dia misy “code” ahafahana manamarina izany sy hialana amin’ny hosoka isan-karazany.
Toraka izany ihany koa ny fomba fiasa eo amin’ny sampandraharahan’ny fandrefesan-tany. Mampiasa io “logiciel” vaovao io ka ahafahana mamoaka ny mombamomba ny “plan”-n’ny tany arakaraka ny fangatahan’ny olona.
Nambaran’ny minisitry ny M2PATE fa tanjona amin’ity tetikasa ity ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny. Eo koa ny fampiasana ilay “logiciel” Lisom ary indrindra, ny hanatraran’ny minisitera ny vina napetraky ny Filoham-pirenena amin’ny hoe “Madagasikara mandroso sy maoderina”.
Ankoatra izay, nanambara ny tale jeneralin’ny fananan-tany fa hihitatra amin’Antananarivo Renivohitra ny fametrahana io fomba fiasa io avy eo haparitaka manerana an’i Madagasikara izany.
Tsy hisy ny taona fotsy amin’ity taom-pianarana ity, raha ny fanamafisana avy amin’ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena, omaly nandritry ny valandresaka natao teny amin’ny birao teny Anosy. Nampahafantatra ny besinimaro araka izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ...Tohiny